Iyo infographic ine Chikonzero Chero Iwe Chaunofanirwa Kutarisisa pane Nhare | Martech Zone
Takapedza zvikamu zvakati wandei pa Kumucheto kweWebhu Radio kuudza vateereri vedu nezvekukosha kwenhare. Isu tinowanzo taura maererano neshambadziro yekushambadzira asi sezvo ini ndanga ndakagara pachiteshi ndichikurukura nezve show naErin Sparks we Saiti Maitiro, zvakanyatso kwayedza pandiri mashandisiro anoita hunhu mbozhanhare hwaichinja zvichienderana nehupenyu hwangu.
Manheru ano ndakanyora shamwari yangu yakanaka ndichinyunyuta kuti email yake yakanga isiri nhare inopindura uye kuti handina kukwanisa kuverenga pafoni yangu. Kana yako email isina kugadziridzwa, pane munhu anganyunyuta? Kana kuti vangangozvifuratira kana kutozvinyoresa?
Mavhiki mashoma apfuura pane edu Podcast, Ini ndakanyora pamusoro gumi nemaviri maitiro akasiyana ataimboita kunze kwemidziyo yedu mbozha zvisati zvaitika asi izvo zvese zvaive zvatamira kuchanza cheruoko rwedu. Kufona, kutumira mameseji, kamera, maaramu, chenjedzo dzekendendari, zvekutengeserana, mepu, mimhanzi, vhidhiyo, kubhengi, mitambo, magariro, hutano, kuteedzera, kubhadhara, kubhadharisa, kutsvagisa, kutumira tsamba, kutumira mavhidhiyo…
Erin akataura kwandiri nezvakakura sei runyorwa. Ndakauya nazvo nekungoongorora zvangu zvandaiita zuva rese. Uye iro rondedzero rinoramba richikura se mobile application uye gore rinoramba richindishandira zvese zvandinoda. Nhare yangu yakakosha mukubudirira kwebhizinesi rangu, kutaurirana nemhuri yangu, uye kubata zuva rangu rekushanda kwezuva nezuva uye hupenyu hwepamba. Ndine chokwadi chekuti handina chokwadi nezvandaizoita ndisina foni yangu! Ini ndinotya kana kufunga nezvazvo!
Handisini ndega - zvinoita sekunge nyika yese yaenda nhare uye mabhizinesi anoda kuziva kuti vatengi vavo vatovepo… kunyangwe bhizinesi ravo risiri!
Tags: inobatanidza nhareDK New Mediakumucheto kwewebhu redhiyoMarketing technology blogMmsmaalarm efoniYeMahara neThebhu Kushambadziramobile bankingnharembozha chenjedzokamera kamerakutengeserana kwenharenharembozha yevatengi maitironharembozha mutengi maitiromobile emailingnharembozhanharembozha yekuteveramobile infographicmobile invoicingmepu yekufambisamobile marketingmumhanzimobile kubhadharakutsvagisa nharenharembozhambozhanhare mamesejimobile tikitimobile videomobile vhidhiyo yekurekodhafonisaiti marongeroSMSmameseji
Cobia Systems: Yakazara Yakagadziriswa Yemagariro Midhiya uye Syndication